China Woodworking saw saw, aluminium saw saw, carbide saw blade, fitaovana fanapahana orinasa ary mpanamboatra | Boda
Sombin-kazo vita amin'ny ala, alim-bary vita amin'ny aliminioma, antsy boribory karbida, fitaovana fanapahana
Vongan-tsofa firaka / tadin'ny tsofa vy
Ny tsiranoka karbida simenitra no fitaovana fanapahana matetika ampiasaina amin'ny fanodinana vokatra vita amin'ny hazo. Ny kalitaon'ny tsiranoka karbida dia mifandray akaiky amin'ny kalitaon'ny vokatra voahodina. Ny fisafidianana ny tsiranoka karbida mahitsy sy mitombina dia misy dikany lehibe hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, hanafohezana ny tsingerina fanodinana ary hampihena ny vidin'ny fikarakarana. Ny elanelan'ny karbida simenitra dia misy masontsivana marobe, toy ny karazana lohan'ny fanapahana karbida, ny akoran'ny substrate, ny savaivony, ny isan'ny nify, ny hateviny, ny endrin'ny nify, ny zoro, ny savaivony amin'ny lavaka sns. Ireo masontsivana ireo dia mamaritra ny fahaizan'ny milina sy ny fanapahana ny tsiranoka. Rehefa mifantina ny tsofa saw, dia ilaina ny misafidy tsara ny tsofa saw, arakaraka ny karazany, ny hateviny, ny hafainganam-pandrefesana, ny fanapahana ny lalana, ny hafainganam-pandehan'ny sakafo ary ny sakan'ny saw.
firaka saw saw:
Ny karazana karbida simenitra mahazatra dia kobalt tungsten (kaody YG), kilasy titanium tungsten (kaody YT). Ny karbida simenitra cungalt tungungen dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fanodinana hazo noho ny fanoherana misy fiatraikany tsara.
Ny maodely fampiasa matetika amin'ny fanodinana hazo dia yg8-yg15. Ny isa aorian'ny YG dia manondro ny isan-jaton'ny atiny kobalta. Miaraka amin'ny fitomboan'ny atiny kobalta, nohatsaraina ny hamafin'ny fiantraikany sy ny tanjaky ny firaka, fa mihena kosa ny hamafin'ny fihenjanana sy ny fitafiana. Noho izany dia tokony hofidina araka ny zava-misy marina izy io.
1. 65Mn lohataona vy manana elastika tsara sy plastika, fitaovana ara-toekarena, fitsaboana hafanana tsara manamafy ny fahaizany, mari-pana ambany fanafanana ary mora simba. Azo ampiasaina amin'ny tsofa saw miaraka amin'ny fepetra takiana ambany.
2. Ny vy vita amin'ny karbaona dia misy atiny avo lenta sy mitarika hafanana mafana, saingy mihena be kosa ny hamafiny sy ny fanoakany rehefa 200 ℃ - 250 the ny mari-pana. Ny fahasamihafana amin'ny fitsaboana amin'ny hafanana dia lehibe, ny fahaizana manamafy no mahantra, ary ny fotoana iainana dia lava sy mora vaky. Famokarana fitaovana ara-toekarena amin'ny fitaovana fanapahana toy ny T8A, T10A, T12A, sns.
3. Raha ampitahaina amin'ny vy misy gazy karbonika, ny vy vy alika dia manana fanoherana hafanana tsara kokoa, fanoherana mitafy ary fampisehoana fitsaboana tsara kokoa. Ny mari-pana deformation hafanana dia eo anelanelan'ny 300 ℃ sy 400 ℃, izay mety amin'ny famokarana elatra boribory boribory avo lenta.
Izy io dia vy vy avo lenta miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta.
Fifidianana ny savaivony:
Ny savaivon'ny valan-tsofa dia mifandraika amin'ny fitaovana fanatsofana ampiasaina sy ny hatevin'ny faritry ny asa. Raha kely ny savaivon'ny tsofa, dia somary ambany ny hafainganam-pandrefesana; rehefa lehibe ny savaivon'ny tsofa, dia avo ny fepetra takiana amin'ny tsofa sy ny tsofa, ary avo ihany koa ny fahombiazan'ny tsofa. Ny savaivony ivelany amin'ny tsofa saw dia voafantina araka ny maodelin'ny milina boribory samihafa, ary ny tsofa tsofa misy savaivony mitovy no ampiasaina.
Ny savaivon'ny faritra mahazatra dia 110mm (4 santimetatra), 150mm (6 santimetatra), 180mm (7 santimetatra), 200mm (8 santimetatra), 230mm (9 santimetatra), 250mm (10 santimetatra), 300mm (12 santimetatra), 350mm ( 14 santimetatra), 400mm (16 santimetatra), 450mm (18 santimetatra), 500mm (20 santimetatra), sns.
Nomery nify voafantina:
Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny maha-maro ny nify no hitombo ny sisin'ny fanapahana mandritra ny fotoam-pivarotana, ary ny fahombiazan'ny fanapahana tsara kokoa. Na izany aza, raha betsaka kokoa ny nify manapaka, ilaina ny habetsaky ny karbaona simenitra, ary ho lafo ny vidin'ny tsofa tsofa. Na izany aza, raha matevina loatra ny nifify, dia ho kely kokoa ny fahaiza-mitazona eo anelanelan'ny nify, ka hiteraka hafanana ilay tsofa. Ankoatr'izay, raha tsy mifanaraka tsara ny tahan'ny fahana, dia ho kely dia kely ny fanapahana ny nify tsirairay, izay hanaratsy ny sisin'ny lelany sy ny lelany Ny fihenan'ny asa-miasa dia misy fiantraikany amin'ny ain'ny serivisy. Amin'ny ankapobeny, ny elanelan'ny nify dia 15-25 mm, ary ny isan'ny nify dia tokony hosafidiana arakaraka ny fitaovan'ny tsofa.
Fifantenana ny mombamomba ny nify:
Ny endrika nify ampiasaina matetika dia misy nify havia sy havanana (nify mifandimby), nify fisaka, nify fisaka tohatra (nify avo sy ambany), nify trapezoid mivadika (nify conical mivadika), nify voromailala (nify boribory), ary indostria kilasy telo havia sy nify fisaka iray havanana, havia sy havanana, sns.
1. Ny nify havia sy havanana dia be mpampiasa, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo sy mitoto tsotra. Izy io dia mety amin'ny fanapahana sy famakiana karazan-kazo matevina sy mafy mafy, takelaka misy sosona, takelaka maro sosona, tabilao sombin-javatra, sns. Ny nify havia sy havanana miaraka amin'ny nify fiarovana fiarovana dia ny nify nify, izay mety amin'ny fanapahana lava. amin'ny karazan-javamaniry rehetra misy kofehy; ny tsofa tsofa havia sy havanana miaraka amin'ny zoro ratsy eo aloha dia matetika ampiasaina amin'ny tsofa fanenitra noho ny nifiny maranitra sy ny kalitaon'ny fanapahana tsara.
2. Ny sisin'ny tsofa nify dia marokoroko, miadana ny hafainganam-pandeha, ary ny fikikisana no tsotra indrindra. Ampiasaina indrindra amin'ny famitana hazo tsotra miaraka amin'ny vidiny mirary. Ampiasaina indrindra ho an'ny tsiranoka tsofa aluminium misy savaivony kely izy io mba hampihenana ny firaiketam-po mandritra ny fanapahana azy, na ampiasaina amin'ny tsiranoka mitsangatsangana mba hitazonana ny latabatra ambanin'ny ambany.
3. Ny nify fisaka tohatra dia fitambarana nify trapezoidal sy nify fisaka, izay sarotra kokoa amin'ny fikikisana. Izy io dia afaka mampihena ny fisehoan'ny vaky vava rehefa mitsofa. Izy io dia mety amin'ny fametahana takelaka vita amin'ny hazo tokana sy avo roa heny ary takelaka misy afo. Mba hisorohana ny firaiketam-po, dia matetika ampiasaina ny tsofa tsofa miaraka amin'ny nify fisaka tohatra.
4. Ny nify tohatra miolakolaka dia matetika ampiasaina ao amin'ny lelan-tsofa lovia ambanin'ny tsofa. Rehefa mijery ny tontonana miorina amin'ny hazo miorina amin'ny hazo roa dia manamboatra ny hateviny ny tsofa ahitra mba hamenoana ny fikolokoloana, ary avy eo ny tsofa lehibe dia mameno ny fizotran'ny tsofa mba hahasorohana ny firodanan'ny sisin'ny tsofa.
1. Rehefa miasa dia tokony hamboarina ny sombin'asa, ary ny toeran'ny piraofilina dia tokony hifanaraka amin'ny làlan'ny fanapahana mba hisorohana ny fanapahana tsy ara-dalàna. Aza asiana tsindry amin'ny sisiny na fanapahana fiolahana. Ny sakafo dia tokony ho marin-toerana mba hisorohana ny fifandraisan'ny lelan-tsolika amin'ny sombin'asa, izay mety hiteraka fahasimbana amin'ny tsiranoka na manidina avy eo amin'ny sehatry ny asa.
2. Raha sendra misy feo sy hovitrovitra tsy mitongilana, tampon-kapoka matevina, na fofona hafahafa dia tokony hatsahatra eo no ho eo ny fandidiana ary tokony hatao ny fanaraha-maso sy ny fikaroham-bahaolana hisorohana loza.
3. Rehefa manomboka sy mijanona ny fanapahana dia aza manome sakafo haingana loatra hisorohana ny fahatapahan'ny nify sy ny fahasimbana.
4. Raha manapaka firaka aliminioma na metaly hafa ianao, dia tokony hampiasaina ny menaka fanalefaka manokana mba hisorohana ny hafanana be loatra, ny nify ary ny fahasimbana hafa, izay misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fanapahana.
5. Ny fantsom-panafahana fantsona sy fitaovana suction sotasota amin'ireo fitaovana dia hakatona, mba hisorohana ny fikororohana ny vatosanga ary hisy fiantraikany amin'ny famokarana sy ny fiarovana.
6. Rehefa manapaka maina, azafady aza manapaka mandritra ny fotoana maharitra mba tsy hisy fiantraikany amin'ny tsofa
BOSENDA Manomeza famaritana feno momba ny fanapahana hazo / tadin'ny fanapahana aluminium, / Blade Wood / Aluminium Disc. Loha fanapahana alika avo lenta, mahafeno ny filan'ny fanapahana indostrialy, asa miorina, mora ampiasaina. Ny kofehy fanapahana tsy fenitra dia azo namboarina ihany koa.
Previous: Fitotoana kodiarana, fanapahana fanapahana resina, kapila fanapahana vy, fantsom-bozaka fanapahana zoro, kapila fanapahana
Manaraka: Drafitra roa sosona, wrench misy tanjona roa ratchet, wrench ratchet loha azo ovaina, wrench malalaka misokatra, boaty boaty, maivana azo ovaina